UCell C wehlise kakhulu ama-data, ungase umise kabi izimbangi | isiZulu
Johannesburg – Inkampani yomakhalekhukhwini, uCell C, usuwehlise amanani awo ama-data esinyathelweni okulindeleke ukuba ‘sidlise ngamapayipi’ izimbangi zawo.
UCell C uthi ukwehla kwamanani ama-data kuleli kwenze wakwazi ukuqhamuka nama-package ama-data abiza kangcono. Manje amanani awo ama-data ezigaba ezehlukene asezoncintisana nama-FreeMe data bundle akwaTelkom.
Amanani amasha ale nkampani eza nama-package amahlanu ezoncintisana ngawo nezinye izinkampani njengengxenye yezinhlelo zawo zeConnector nokuzokwenza ukuthi uncintisane ngqo namaFreeMe bundle akwaTelkom nabiza kancane.
Izinhlelo ezinhlanu zakwaCell C ezibizwa ngamaConnector Plans zizonika amakhasimende ama-data angaze afinyelele ku-50GB kanye nama-minutes angu-3 000 okufonela noma ngabe iyiphi inombolo ngenyanga.
OLUNYE UDABA: UVodacom nohlelo olushibhile lokubuka ama-video ku-YouTube
Zonke lezi zinhlelo ziyathokala ngokuthi uthenge i-SIM card kuphela bese uhlomula inyanga nenyanga, noma amakhasimende angakhetha inkontileka yezinyanga ezingu-24. Uma ethanda, amakhasimende angaphinde azikhethele nefoni, bese eyikhokhela ngesikhathi esibekiwe senkontileka.
“Indlela amakhasimende asehlangana ngayo nasexhumana ngayo iyaqhubeka nokuguquka futhi thina njengezinkampani zomakhalekhukhwini kumele siqinisekise ukuthi amakhasimende ethu athola lokhu akufunayo, futhi ngendlela abakufuna ngayo, ukuze akwazi ukuhlala exhumene,” kusho iCEO yakwaCell C, uJose Dos Santos.
“Siyazi ukuthi amakhasimende awafuni ukukhathazeka ngezindleko zawo zokuxhumana nyanga zonke.”
UDos Santos uthi la manani akamuva kumele anikeze amakhasimende ukuthula, aphinde awanikeze nenkululeko yokuxhumana ngendela athanda ngayo.
Amaminithi okufona angeke aze akaleleke ekufoneleni izinombolo zakwaCell C kuphela, kodwa ungakwazi ukufonela ngawo noma ngabe yiyiphi enye inkampani yomakhalekhukhwini.
Ngaphezu kwalokho, uCell C uzokwengeza ukungena mahhala kuFacebook, uphinde ugcine neWhatsApp bundle ka-R12.